KRASSULA OVAT: WAX WALBA OO KU SAABSAN DARYEELKA, UBAX, CAYAYAANKA IYO SAWIRRADA - SOOSAARKA DALAGGA
Nooca floral ee caadiga ah - Crassula Ovat
Geedka "loo yaqaan" geed "wuxuu leeyahay dhowr magacyo rasmi ah. Waxaa loo yaqaan sida Crassula waxaa ka soo baxa obliqua - Crassula Ovata, Ovchule ama Ovcholchik ovoid. Waxaa intaa dheer, waxaa loo yaqaan "geedkii saaxiibtinimo" iyo "geedka nasiib."
Waxaa lagu xisaabiyaa saameyn faa'iido leh oo ku saabsan masiirka milkiilaha, laakiin marka lagu daro kuwan guryaha "magic" Warshadda waxaa sidoo kale loo yaqaanaa xaqiiqda ah in ay sii deyneyso walxaha bayolojiga firfircoon ee si fiican u saameeya qofka, hagaajinta hawada qolka.
Warshadani waa hooyo ka mid ah Koonfur Afrika, oo u caanbaxday jawi qallalan oo awood u leh in ay ilaaliso kaydka dareeraha. Crassula waxaa lagu koray guriga iyo beeraha xayawaanka.
Astaamaha iyo sharaxaadda
Crassula Oval waa geedo, wuxuu leeyahay asliga ah jilicsan, taas oo, sida geedka ku koraa, isu beddelaayo jir, wuxuu noqonayaa duurjoog. Taasina waa sababta haweeney dufan ay uga codsanayso kuwa jecel bonsai - beerista geedaha gudaha.
Caleemaha warshadda badan. Waxay ku wareegsan yihiin, miisaanka iyo casiir leh. Dusha sare ee caleemaha waa dhaldhalaal, oo aan ubaxin. Waxay noqon karaan kuwo cagaaran oo cagaaran ama lacag ah. Laga soo bilaabo qorraxda dhalaalaya mararka qaarkood waxay heli kartaa hooska cas ee casaan. Sidoo kale caleenta caleemaha waxaa laga yaabaa inay u muuqato dhar cad.
Crassula Ovata Daryeelka Guriga
Beerto waxay ku fiican tahay dhoobada dhoobada culus, sida dufanku u koraan laanta, oo leh dushooda culus. Warshad Tani waa mid aan degganeyn, waxaa si gaar ah halis ugu ah in ay ka soo baxdo cimilada dabaysha. Daranaanta dhoobada dhoobada ayaa badbaadin doonta qandhada oo ka imanaysa hoos u dhac iyo jajab.
Qalabaynta waxaa ugu fiican guga, mar laba sano kasta, marka nidaamka xididka ee warshadda waxay buuxisaa dheriga oo dhan. Waa inaan iloobin dheecaan wanaagsan.
Halbeegga ugu wanaagsan ee ciidda loogu talagalay dhoobada waxaa ka mid ah saamiyada isku midka ah ee peat, turf, carrada caleen, humus iyo ciid. Waxa kale oo suurtogal ah in la isticmaalo substrate oo ah ciid, dhoobo dhoobo, dhulka oo soo jiidanaysa 2: 3: 1. Inta badan dhulka ayaa loo baahan yahay in la beddelo 2-3 sano kasta.
Ka waraabinta wejiga waa in ay ahaataa mid dhexdhexaad ah, ma oggolaan karno in qulqulka qulqulka. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale laguma talin in la sugo illaa inta dhulku gebi ahaan qalalan yahay.
Xilliga qaboobaha, qadarka caadiga ah ee biyaha waa in la yareeyaa oo la waraabiyaa oo keliya marka caleemaha geedka ay bilaabaan inay yareeyaan.
Hawada hawada qallalan ma baqdo, waddada - xataa waxtar leh. Crassula jecel yahay hawada furan, qolal hawo leh. Mararka qaarkood dhirta waxay u baahan tahay in lagu buufiyo biyo diirran, oo biyo nadiif ah ka dhaqaya caleemaha dharka qoyan.
Bacriminta iyo dharka
Si aad u quudiso qashin, Bacriminta cacti waxaa loo isticmaalaa - kuwa leh content nitrogen hooseeyo. Guga iyo dayrta, dhirta ayaa u baahan in la quudiyo mar 3-4 asbuuc kasta, xagaaga - hal mar bishii. Xilliga jiilaalka, muhiim ma aha in la bacrimiyo dhulka. Ha ku dhaafin bacriminta, haddii kale dhirta afkoda waxay noqon doontaa mid dheer oo daciif ah.
Nooca iftiinka ah
Crassula wuu jecel yahay iftiinka tooska ahSidaa daraadeed waxa ugu wanaagsan in la doorto meesha ugu qatarsan ee aqalka ah: tusaale, koonfurta ama galbeed. Si kastaba ha noqotee, ka dib xilliga qaboobaha xilliga qaboobaha, waa in dhirta la baro si qumman oo qorrax leh si looga fogaado gubashada.
Iyadoo iftiinka saboolka ah, dushooda dhirta ayaa la soo saaraa, daciifay oo yaraaday. Dabcan, tani ma qurxin dusha sare ee marka la eego, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u aragto in dusha sare uu yahay qaabdhismeedka dhulka, u wareeji dhirta u dhow qorraxda.
Habka kuleylka ah
Heerkulka ugu wanaagsan ee awooda + 20-25 digrii. Xilliga jiilaalka, way raaxeysantahay +6-10 heer kulka, inkasta oo heerkulka qolka uu geedka dareemo caadi - si kastaba ha ahaatee, caleemaha waxay kala bixin kartaa.
Crassula waxay u dulqaadan kartaa hargabka xilliga gaaban ee aan ka badneyn 0 digrii, laakiin guud ahaan ma jecla qaboojinta. Isla markaa waxay ku dhowdahay bateriga ayaa sidoo kale ka hortagaya.
Waxaa suurtogal ah in dacaayad laga dilo wakhti kasta oo sanadka ah. Waxaad qaadan kartaa gabal tufaax ah ama stem stem leh afar caleemo. Toddobaadka dhexdiisa, waa in la qalajiyaa, ka dibna lagu beeray carrada qoyan. Waa inay ka kooban tahay dhulka compost iyo dufcadaha ee saamiga 2: 1. Ka dib markii la beero, dheriga waa in lagu daboolaa caag balaastik ah oo aan la saarin 4-6 asbuuc, ilaa iyo gooynta xididdo.
Guriga, Crassula Ovata sida caadiga ah wuxuu gaaraa 90 cm dhererka. Xaga sare ee mitirka, marar dhif ah ayaa ku kora. Dabeecadda, noocan oo kale ah ee dhirta ayaa kici kara dhammaan saddexda mitir.
Marka la eego, Krassula wuu si tartiib ah u koraa. Marka uu gaaro 15 cm, wuxuu sii deynayaa caleemaha ugu horreeya ee dhinacyada, calaamadda ah 60 cm, waxay bilaabmaysaa inay ubaxdo.
Xaaladaha ku haboon iyo daryeelka saxda ah, waa isku-buuq gaaban ilaa 20 sano.
Haweeneyda dufanka leh waxay leedahay mudo aan ciyaaleyn ah laga bilaabo Sebtembar ilaa Bisha Febraayo. Waqtigaan, waxaa lagama maarmaan ah in warshadda waraabiyo kaliya hal mar toddobaadkii., isla mar ahaantaana ku hay meel isla iftiin leh. Heerkulka la doorbiday wakhtigan waa +15 digrii.
Marka uu gaaro da'da 5 sano, sida caadiga ah Crassula bilaabaan inay ubaxu. Waxay dhacdaa dayrta ama jiilaalkalaakiin aan joogto ahayn. Tani waxay u baahan tahay qadar kugu filan oo qorraxda tooska ah.
Ubaxyo dabiici ah ayaa ka muuqda dushooda caleemaha waxayna matalaan inflorescences. Waxay u eg yihiin xiddigo yaryar oo midab cad ama casaan ah.
Crassula waxaa ugu badan oo ka yimaada gooryaanka iyo jiritaanka, taas oo burburin karta geedka. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro cayayaankaas caleemaha bollard leh suufka suufka lagu rusheeyey cayayaanka.
Xaaladaha ugu sareeya, waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo geedka oo dhan daawada cayayaanka.
Sidoo kale, cudurrada waxaa ka mid ah caleemo saarista. Tani waxay muujinaysaa biyo ama xadid xad dhaaf ah. Geedka geedka meel kale u wareeji ka hor intaanad ka waraabin inaadan iloobin inaad hubiso in dhulku qalalan yahay.
Crassula waa xulasho weyn oo loogu talagalay geedka ubaxlayaasha. Waa arrin aan qabyo ahayn, iyada oo waxtar badan oo awood u leh in lagu qurxiyo wixii ururin ah ee dhirta. Iyo sifooyinka suugaanta ee soo jiidashada maaliyadeed ee qaar ka mid ah milkiilayaasha qaarkood waxay noqon karaan faa'iido dheeraad ah oo ku haboon "geed".
Marka xigta waxaad arki kartaa sawirka Krassouly Ovat: